Xeebaha - Wararka Safarka | Wararka Safarka (Bogga 2)
Biarritz waxay leedahay xeebo badan oo qurxoon oo loogu talagalay qorraxda, dabaasha, dabaasha, ciyaarta ama socodka. Kee baad raadineysaa?
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu fiican ee qaawan ee xeebta jasiiradda Tenerife iyo waxa ay kuu soo bandhigto.
Cala Macarella waa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Menorca sababo la xiriira ciiddeeda cad, biyo buluug ah oo turquoise ah iyo hareeraheeda.
Cala Moraig waa mid ka mid ah xeebaha ugu caansan gobolka Alicante. Dhexdeeda, Cova dels Arcs ayaa taagan.
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu qaawan ee xeebaha Almería, oo ah goobo bacaad ah oo ay tahay inaad booqato.
Xeebta El Cañuelo waxaa lagu qaabeeyey jawi dabiici ah oo aad u qurux badan una dhow magaalada quruxda badan ee Malaga ee Nerja.
Waxaan kuu sheegeynaa waxa laga arki karo xeebta quruxda badan ee Oyambre ee Cantabria iyo meelaha u dhow.
Waxaan ku siinaynaa talo ku saabsan waxa lagu arko Cala Llombard, jasiiradda Mallorca, iyo sidoo kale meelaha ku dhow.
Waxaan ka wada hadli doonnaa kuwa ugu quruxda badan xeebta Huelva, aagagga bacaadka ah ee bixiya soojiidashada kala duwan ee dalxiisayaasha.
Xeebaha Portugal waa meelaha ugu mashquulka badan xagaaga Yurub. Xeebta Atlantic ayaa buuxisay ...
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa lagu arko Sanlucar de Barrameda, gal boostadan si aad u ogaato dhammaan waxyaalaha qarsoon ee dahabkan Cádiz qariyo.
Chiclana waa mid ka mid ah magaalooyinka xeebta ugu quruxda badan ee Cádiz, waxaan kuugu sheegi doonaa boostadan oo ah kuwa ugu fiican xeebaha.
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu fiican xeebaha Spain, xeebo badan oo bacaad leh oo la booqdo.
Waxaan ku tuseynaa meelaha ugu fiican ee Mallorca, aagag yar yar oo aad ugu raaxeysato fasaxyadaada.
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu fiican xeebaha Huelva iyo astaamaha ay leeyihiin si aad liis u sameyso haddii kani yahay meesha aad u socoto.
Xeebaha ugu wanaagsan ee lagu fuulo
Kuwa jecel Surf waxay u baahan yihiin oo keliya guddigooda, dharkooda qoyan iyo hirarka wanaagsan si ay ugu raaxaystaan ​​...
Sant Feliu de Guixols wuxuu leeyahay dhaxal ballaadhan oo ballaadhan. Laakiin, wax kasta oo ka sarreeya, waxay ku siineysaa xeebo qurux badan iyo meelo qurux badan oo aan la barbardhigi karin.
Xeebaha Jannada adduunka
Waxaan baran doonnaa xeebaha wanaagsan ee adduunka, oo leh dhowr xeebood oo ugu ciid wanaagsan oo lagu booqdo dhulkeenna.
Cala Xarraca, geeska soo jiidashada leh ee Ibiza
Ibiza waa mid ka mid ah Jasiiradaha loo yaqaan 'Balearic Islands' oo caan ku ah inay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago Yurub ...
Xeebaha Cabo de Gata
Waxaan ka hadleynaa xeebaha ugu wanaagsan ee ku yaal aagga Cabo de Gata ee ku yaal Almería, oo leh aagag qurux badan oo ciid leh oo lagu raaxeysto xagaaga.
Waxaan kuu sheegeynaa waxa aad ku arki karto oo aad ku qaban karto xeebta Bolonia, oo ah meel caan ah oo caan ah oo ku taal aagga dabiiciga ah ee Cádiz.
Isla Cristina waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago xeebta Huelva, oo ku taal meel dhawr kiiloomitir u jirta ...
Xeebta Aamusnaanta, ee Asturias
Xeebta Aamusnaanta. Magacaa! Marka gabay, sidaas qarsoodi ah, midna kama caawin karo inuu rabo inuu la kulmo iyada, sax? ...
Waxaan galeynaa xagaaga, hadaanan wali fasax u aadin fikirka inaan joogno xeeb aan qoyno ...
Xeebaha u oggolaanaya eeyaha Asturias
Eeyadu waxay jecel yihiin inay ku soo boodaan hirarka badda oo ay ku buufiyaan biyaha sida aadamaha u badan….
Xeebaha u oggolaanaya eeyaha Cantabria
Torre del Mar iyo soo jiidashadeeda
Xagaagu waa imanayaa waxaanan haddaba ka fikiraynaa meesha aannu u soconno. Ma jecel nahay badda, qorraxda ...
Dalxiiska Badda Dhimatay
Meelaha adduunka ugu yaabka badan ayaa ah Badda Dhimatay. Xaqiiqdii waad maqashay isaga oo aad ...
Playa de las Catedrales waa dhul bacaad leh oo ku yaal woqooyiga gobolka Lugo ee Galicia, oo loo yaqaan dhismaheeda dhagaxa.
Maxaa laga sameeyaa Benidorm
Ma xilligii jiilaalka ayaa laga fikiraa xagaaga? Dabcan! Waa marka aan qorraxdu seegno oo aan kululeyno inta badan, sidaa darteed waxay kaa dhigeysaa inaad rabto inaad qorsheyso ciidahaaga.Benidorm waa xeeb weyn iyo cawayska habeenkii ee Spain iyo Yurub oo dhan. Sands dahab ah, biyo cadcad, qorrax badan, xaflado badan.
Cala Mitjana, xagaaga taga
Menorca markale, markale jasiiraddan quruxda badan leh xeebaheeda quruxda badan waxaa loo soo bandhigaa meel caan ah oo xagaaga lagu taliyo. Miyaadan wali fasax gaarin xagaagan? Ka dib u gudub Menorca oo halkan ha u joojin qorraxda qorraxda ee Cala Mijtana.
Xagaagu waa imanayaa! Haddii aad u gudubto Boortaqiiska waxaad booqan kartaa xeebta Algarve halkaasna waxaad ku booqan kartaa Jasiiradda Tavira oo leh xeebteeda. Oo xitaa waad ku tababaran kartaa qaawanaanta.
Riyada quruxda badan ee Huatulco
Ma jeceshahay xeebaha ciidda cad? Markaa waxaad isku dayi kartaa xeebaha quruxda badan ee Bahías de Huatulco, ee ku taal Baasifigga Mexico.
Booqo xeebaha ugu fiican Thailand
Soo ogow kuwaas oo ah xeebaha ugu fiican Thailand ee ay tahay inaadan ka maqnaan safarkaaga dalkan quruxda badan, laga bilaabo kuwa ugu mashquulka badan ilaa kuwa aan la ogaan.
Xeebaha ugu wanaagsan ee ku yaal Cancun
Xeebaha Cancun waxay ku habboon yihiin sharraxaadda janno: biyaha turquoise, ciid cad, iyo qorrax ifaysa….
10 ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Tenerife
Kuwani waa qaar ka mid ah 10ka xeebood ee ugu wanaagsan Tenerife, xeebo waaweyn oo bacaad leh oo muujinaya quruxda dabiiciga ah ee jasiiradda.
Xeebaha ugu fiican Valencia
Xeebaha Valencia waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee Spain loo tago kuwa jecel inay jiifaan qorraxda iyo ...
Xeebaha ugu fiican Asturias
Soo ogow xeebaha ugu fiican Asturias, xeebta ku taal xeebta Asturia ee quruxda badan, oo ay ku hareeraysan yihiin goobo dabiici ah, qaarkoodna adduunka u gaar yihiin.
Xeebaha ugu fiican dalka Portugal
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu fiican xeebaha Boortaqiiska, dal leh boqollaal kilomitir oo xeeb ah oo lagu raaxeysto xeebo qurux badan.
Xeebaha ugu fiican Mallorca
Soo ogow xeebaha ugu fiican Mallorca, min yar yar oo xasilloon illaa xeebo kale oo ku yaal xarumaha dalxiiska.
Booqo xeebta Dubrovnik
Soo ogow booqashooyinka ugu wanaagsan ee xeebaha Dubrovnik iyo hareeraheeda, geesaha nabdoon ee u dhow magaalada si aad ugu raaxaysato fasax nasasho leh.
6 Yurubta xeebeed ee loo baxsado
Soo hel qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan Yurubta loo tago si aad ugu baxdo adigoo raadinaya xeebo aad u fiican oo leh biyo cadcad.
Xeebta Gulpiyuri, luul Asturias
Ma qorsheyneysaa inaad xeebta aado xagaaga dambe? Kadib fiiri Asturias iyo xeebteeda. Gulpiyuri's waa luul qaali ah.
Fasaxyada xagaaga badanaa waxay la mid yihiin xeebta, qorraxda, badda iyo baarka xeebta. Daraasado kala duwan ayaa tilmaamaya in ugu yaraan hal ...
Sideed u aragtaa xeebaha Tuniisiya xagaagan 2017? Iyagu waa janno run ah wax walbana waad haysataa: taariikh, burbur, cunto, xeebo iyo baashaal.
Meelaha xagaaga qaar laga tago ee Uruguay
Brazil maahan meesha kaliya ee xagaaga loo tago Koonfurta Ameerika. Uruguay waxay leedahay xeelado qurux badan: Punta del Este, La Pedrera, Chuy ...
10 xeebood oo Isbaanish ah si aad u lumiso xagaagan
Soo hel toban xeebood oo waaweyn oo Isbaanish ah oo aan jeclaan lahayn inaan xagaagan seegno. Arenales ka socoda woqooyi ilaa koonfur iyagoo sii maraya jasiiradaha.
Ka baxso kuleylka Lisbon, xeebta!
Ma booqan doontaa Lisbon xagaagan? Marka, si looga fogaado dhalaalida, ku soo wareego mid ka mid ah xeebaheeda. Waxaa jira xeebo u dhow Lisbon oo qurux badan!
Soo ogow waa kuwee 10ka xeebood ee adduunka ugu fiican sanadkan 2017. Liis aad u xiiso badan oo aad ugu raaxaysato xeebta ugu quruxda badan.
Xeebaha ugu fiican Croatia
Soo ogow qaar ka mid ah xeebaha loo tixgeliyo ee ugu wanaagsan Croatia. Xeebaha magaalooyinka ama xeebta idyllic ee jasiiradaha, qaar si gaar ah u gaar ah.
Saddexda goobood ee lagu taliyo ee Maldives
Ma jeceshahay fasax jannada lagu galo? Maldives waa sidaas oo kale waxaanan halkan kuugu dhaafnay saddex ikhtiyaar oo dalxiis oo leh saddex qiime oo kala duwan. Adiga ayaa dooranaya!
Xeebaha ugu wanaagsan Galicia
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Galicia, janno aan ka heli karno xeebo qurux badan oo bacaad leh.
Safarka Barbados, dhulka Rihanna
Kariibiyaanka wax u eg Barbados iyo xeebaheeda ma jiraan. Ma ogtahay in Rihanna ay halkaas ka timid?
Waxaan u safreynaa Melbourne, Australia, si aan u aragno qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Melbourne oo aan ku raaxeysanno meelaha ugu fiican meeshan
Xeebaha ugu fiican eeyaha ee badda Isbaanishka
Eeyadu inta badan ma jecla qorraxda illaa ay ka madhan yihiin laakiin waxay jecel yihiin inay badda ku quusaan. La aan…
Xeebaha iyo xeebta Mijas
Maanta waxaan ognahay xeebaha iyo bakhaarrada aan ka heli karno Mijas, oo ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago ee Malaga Costa del Sol
Xeebaha ugu wanaagsan ee Cantabria
Ma rabtaa inaad xagaaga ku qaadato xeebta? Markaa baro barashada xeebaha Cantabria, oo ka mid ah kuwa ugu fiican Spain.
Xeebaha ugu fiican Jasiiradaha Canary
Xeebaha ugu wanaagsan Jasiiradaha Canary waa magaalooyin, ama deegaan dabiici ah. Waxaa jira xeebo dhammaan dhadhanka, oo leh ciid dahab ah ama madow.
Xeebaha ugu wanaagsan ee Badda Madoow ee Romania
Waxaan ognahay qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan ee lagu arki karo xeebta Badda Madow ee Romania si aad ugu raaxeysato ciidaha dalkan sida buuxda.
Xeebaha ugu fiican Cádiz ee xagaaga lagu qaato
Waxaan ka hadleynaa xeebaha ugu fiican Cádiz, meelaha waaweyn ee lagu raaxeysto cimilada wanaagsan ee aaggan Andalusia.
Eygaaga u kaxee xeebta
Maqaalkani waxaad ka heli doontaa qaar badan oo ka mid ah xeebaha Isbaanishka ee aad ugu tagi karto dhibaato la'aan eygaaga. Eygaaga u kaxee xeebta!
Crete, boqoradda ugu fiican xeebaha Mediterranean
Haddii aad jeceshahay qorraxda, badda iyo xeebta, ma jiraan wax ka fiican Giriigga iyo jasiiradooda dhexdooda, Crete ayaa ugu badan sidaa darteed halkan waa xeebaha ugu fiican.
5 xeebood oo qaawan oo Isbaanish ah si ay u muujiyaan kuwa ugu dabiiciga ah
Soo hel shan xeebood oo waaweyn oo qaawan oo Isbaanish ah si aad naftaada ugu muujiso habka ugu dabiiciga ah. Meelo ku yaal bartamaha dabeecadda oo leh deegaan dabiici ah oo qurux badan.
5 xeebood oo qurux badan oo ku yaal Qubrus si loogu raaxaysto xagaaga 2016
Sidee ku saabsan raaxeysiga xeebaha Qubrus xagaagan 2016? Waxaan kaaga tagay shan ka mid ah kuwa ugu wanaagsan xeebaha Qubrus.
10 xeebo waaweyn oo Calan Buluug ah ku leh Isbaanish
Xeebaha Calanka Buluugga ah waxay leeyihiin dhammaan adeegyadooda iyo tayo deegaan oo aad u wanaagsan, waxanan kaaga sheegi doonnaa wax ku saabsan Spain.
Ma waxaad raadineysaa xeebo xagaaga 2016? Markaa baro xeebahan quruxda badan oo aan sidaa u buurneyn ee Boortaqiiska. Waad jeclaan doontaa iyaga!
10ka xeeb ee dunida ugu xiisaha badan (II)
Waxaan sii wadaynaa xeebaha ugu xiisaha badan adduunka. Waxaan ka hadleynaa xeebaha leh taallo, dhagaxaan ama dhagaxyo la yaab leh.
10ka xeebood ee dunida ugu xiisaha badan (I)
Baro 10ka xeebood ee adduunka ugu xiisaha badan. Xeebo ciid midab leh, oo leh kireysteyaal qosol badan ama qaab dhismeed dhagax weyn oo la yaab leh.
Kuwa ugu fiican Costa Brava: Cala Corbs
Cala Corbs waxay ku jirtaa aagga dabiiciga ah ee Es Castell, mid ka mid ah xaafadaha bikrada ah ee weli ku haray xeebta Girona, ee degmada Palamós
Ma waxaad ka daashay qabowga oo kaliya ka fikir xagaaga? Xagaagu waa isku mid xeebta iyo badda dad badana ma uuraystaan ​​xilliga xagaaga maalmo la'aan iyo
5ta badweyn ee aduunka ugu waawayn
Waxaan ku tusineynaa 5ta badweyn ee adduunka ugu weyn waxaanan kuu sheegeynaa waxyaabaha u gaarka ah mid kasta iyo halka ay ku yaalliin.
Baro xeebaha ugu dheer Yurub iyo adduunka. Ma jiraan wax Spain ah? Gali oo ku raaxee xeebahan halka aad u rabto qorrax-qorraxda iyo badda.
Algarve, socod ku dhex mar xeebaheeda ugu fiican
Algarve waxay leedahay xeebo waaweyn oo xeebteeda ah. Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu fiican xeebaha aaggan koonfurta Portugal ee la booqdo.
Libaaxa Hurda, ku quusitaanka Jasiiradaha Galapagos
Libaaxa Hurda (ama Kicker's Rock in English) waa jasiirad aan la deganeyn oo dhowr kiiloomitir u jirta jasiiradaha San Cristóbal
Cap d'Agde, caasimadda cawrada
Xeebta Cap d'Adge waxay soo jiidataa kumanaan dalxiisayaal ah oo doonaya inay ku dhaqmaan qaawanaanta, ma rabtaa inaad ogaato hoygooda, talooyinkooda iyo howlahooda la heli karo?
Xarfaha Safarka (I)
Waxaa laga yaabaa in alifbeetadan socdaalka ah (I) ay kugu hagi karto inaad qorsheyso safaradaas aanad wali sameyn oo aad rabto inaad sameyso ugu yaraan hal mar noloshaada. Waad dhiirantahay
3 ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Andalusia
Andalusia waxaa ku yaal xeebo badan oo caan ah oo weyn, waxaanan ku tusaynaa seddex ka mid ah kuwa ugu fiican, oo ay tahay inaadan dhaafin haddii aad u safarto koonfurta.
10ka xeebood ee adduunka ugu fiican sanadkii 2015
Soo ogow xeebaha ugu fiican adduunka ee 2015, oo ay doorteen isticmaaleyaasha iyo safrayaasha ku yaal TripAdvisor, meelaha riyooyinka loogu talagalay fasaxa soo socda.
Sababaha loogu lumayo Xeebta Galbeed ee Andalusiya (I)
Ma kula tahay inaan ku siino sababo aad ku luntid Xeebta Galbeed ee Andalus (I)? Waa kuwan wax yar, iyo berrito iyo ka sii fiican.
Meelaha qorraxda la tago bisha Nofeembar
Meelaha qoraxdu u dhacdo bisha Nofeembar ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican kuwa fasaxyada haysta xilligan. Soo hel meelaha xiisaha leh ee booqashada.
Xeebta Poipu ee Hawaii
Xeebta Poipu waxay ku taal jasiirad ku taal Hawaii, xeeb aad u ballaadhan oo ay ka buuxaan adeegyo tayo leh si aad ugu raaxaysato fasaxaaga.
Xeebaha ugu sareeya 3 ee Jamaica
Jasiiradda Jamaica waa meel ku habboon oo lagu raaxeysto xeebaha. Waxaa jira seddex xeebood oo loo arko kuwa ugu fiican oo ay tahay inaad soo booqato.
Sands Golden, xeebta ugu fiican Bulgaria
Sands Sands waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago ee ku teedsan xeebta Bulgaariya ee ku taal Badda Madow
Sidee xeebaha loo sameeyaa?
Sidee xeebaha loo sameeyaa? Maqaalkan kooban waanu kuu sharxi doonaa.
Xagaaga 2015, xeebaha ugu fiican Montenegro
Burburkii Darbigii Berlin ka dib iyo dib u qaabeynta Bariga Yurub, meelo cusub oo loo safray ayaa ka muuqday khariidada ...
Xeebaha Durban, Koonfur Afrika
Xeebaha Durban, waxay ka mid yihiin xeebaha ugu wanaagsan Koonfur Afrika
Stiniva, xeeb ku taal Croatia
Stiniva waa xeeb gooni ah oo ku taal Croatia, halkaas oo aan aad ugu xasilloon doonno. Soo ogow geeskan yar ee soo jiidashada leh.
Saddex ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan adduunka
Layaab sadexdan xeebood ee aduunka ugu quruxda badan. Way mudan yihiin in la qaddariyo oo laga fikiro!
Xeebaha Jasiiradda Troia, ee Boortaqiiska
Duleedka Lisbon waa jasiiradda Troia oo leh mayl iyo mayl xeebo qurux badan
Paraty, oo ku taal xeebta waqooyi ee Brazil
Paraty waa magaalo xeebeed qurux badan oo ku taal xeebta waqooyi ee Brazil, afar saacna u jirta Rio
Corniche, xeebta ugu caansan ee Abu Dhabi
Xeebta Corniche ama Cornisa waa xeebta ugu caansan ee Abu Dhabi
Sokha, mid ka mid ah xeebaha quruxda badan ee Kambodiya
Xeebta Sokha waxay ku taal gobolka Kaamboodiya ee Sihanoukville
La Paloma, waa xeeb ku taal Faransiiska
Xeebta La Palomar waa xeeb Faransiis ah oo ku dhow Nice
Shell Beach, xeebta Guyana halkaas oo qoolleydu ukun dhigato
Xeebta Shell ee Guyana ayaa ah halka qoolleyda baddu ku dhashaan sannad kasta
Xeebaha ugu fiican Hong Kong
Maqaalkani waxaan kuu sheegeynaa kuwa ka mid ah xeebaha ugu fiican ee aad ka heli karto Hong Kong
Jericoacoara, oo ka mid ah xeebaha ugu fiican Brazil
Xeebta Jericoacoara, waa mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan dalka Brazil
Artic Resort Kakslautten, oo ku taal iswiidhishka Lapland
Artic Resort Kakslautten, igloos oo ku taal Lapland
Xeebaha Jasiiradaha Mitako, Xeebaha Japan, Okinawa
Maqaalkani waxaan ku sameyneynaa dib u eegis yar oo ku saabsan qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan ee aad ka heli karto Shiinaha. Dhammaantood miyaad taqaan?
Jasiiradaha ugu wanaagsan Caribbean-ka, sida laga soo xigtay USA Today
Jariidada Mareykanka ee USA Today ayaa soo saartay liis ay ku qoran yihiin jasiiradaha ugu wanaagsan Caribbean-ka ee dalxiiska xeebta
Xeebaha ugu wanaagsan ee Cumaan
Waan ognahay qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan ee aan ku arki karno Cumaan
5 xeebo qurux badan oo ku yaal badda Mediterranean
Waxaan kuu soo bandhigeynaa liis yar oo leh qaar ka mid ah shanta xeebood ee ugu wanaagsan ee aan ka heli karno xeebaha Mediterranean.
Xeebaha ugu fiican Costa Rica
Waxaan u safreynaa Costa Rica si aan u ogaanno qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan dalka
15ka xeebood ee ugu fiican (II)
1 - Montalivet (Faransiiska) Dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee dabiiciga wuxuu halkan ka bilaabmay 1950 wuxuuna kasbaday sharaf ...
15ka xeebo qaawan ee ugu fiican (I)
Waxaa jira waxyaabo badan oo badal ah oo lagu sameeyo fasaxyadeena maantana waxaan helnay fursado badan ...
Haddii aad dooneyso inaad u baxdo dhanka Boortaqiiska, waxba kuma dhimeyso inaad ogaato kuwa ugu caansan xeebaha aad ka heli karto dalkan iyo magaalooyinkaba.
Xeebta Pink Gin ee Granada
Meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Salinas, xeebtaan cajiibka ah waa meel aad caan uga ah Granada, biyaheeda deggan ...
Discos, Naadiyada iyo Baararka ugu Fiican Aasiya (Qeybta 1)
Caadi ahaan markaan ka fekereyno safar safar Aasiya, booqashooyinka qabuuraha, dhaqammadii hore, dalxiiska ...
Ka adeegashada Singapore
Haddii aadan wali Aasiya aadin, Singapore waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo. Kaliya maahan maxaa yeelay tan iyo ...